Olee otú n'Imepụta Capture na iMovie on Mac / iPhone / iPad u
Olee otú n'Imepụta Capture na iMovie on Mac / iPhone / iPad
Na iMovie, ị nwere ike mfe dezie videos ka kwa gị chọrọ. The wuru na ọbá akwụkwọ ndokwa gị videos mere na ndị niile weghaara fim i dezie ma ọ bụ kere bụ nanị click pụọ. The revolutionary interface nke iMovie ka ọ dị mfe na-agagharị na gị nkiri n'ọbá akwụkwọ na ike ndị ọhụrụ. Ọzọkwa, ọ na wuru maka ekere òkè dị ka nke ọma site ekwusara gị videos na-ewu ewu video n'elu ikpo okwu YouTube maka iPhone, Apple TV na iPod. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke akada ihuenyo, ọhụrụ mbipute nke iMovie 11 ga-ekwe ka ị ifriizi etiti site na nri ịpị clip. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke otú weghara ihuenyo na iMovie, ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu maka gị.
Part1: weghara ihuenyo na iMovie on Mac
Part2: ihuenyo kpọọ na iMovie on iPhone / iPad
Part3: Olee weghara ihuenyo on Windows iji Free Software
1. Họrọ clip ị ga-achọ weghara dị ka a ka na-eku.
2. Mia òké na nhọrọ na ị chọrọ a ifriizi etiti ma Right click.
3. Họrọ nhọrọ "Tinye ifriizi etiti".
Ọ bụ nnọọ mfe ike a screenshot na iMovie site nnọọ na nri ịpị họrọ clip na ị na-ahọrọ "Ifriizi etiti". Otú ọ dị, ihe oyiyi faịlụ na ị jidere mbụ kpamkpam. Ọ bụrụ na ị nri pịa a ifriizi etiti na iMovie, nhọrọ "na-egosi na Finder" kpamkpam na pop menu. N'ihi na nke a ị chọrọ ime ndị na-esonụ.
4. Hover gị òké n'elu nkiri clip, na ifriizi etiti e kere si. Right pịa ma họrọ nhọrọ "na-egosi na Finder".
5. Right-Pịa nkiri faịlụ na Finder ma họrọ na-emeghe QuickTime Player.
6. QuickTime Player chọta n'ókè na nkiri site na nke ị na-achọ ike ihe oyiyi.
7. Open Preview ma họrọ File, New Wụk-N; Preview ga-ike a ọhụrụ PNG akwụkwọ otu hà ka ndị nke nkiri faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji iMovie na gị iPhone ma ọ bụ iPad ịchọrọ nwere screenshot nke ọkacha mmasị gị akụkụ, ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ guideline maka gị.
1. Tinye chọrọ video ka usoro iheomume.
2. Play video na họrọ mgbe na nke ị chọrọ weghara screenshot. Press kwusi.
3. Pịa ma jide ike na n'ụlọ igodo ọnụ maka nke abụọ. A na-acha ọcha flash ga-egosi na gị na ihuenyo egosi, i nwere ihe ịga nke ọma weghaara nseta ihuenyo. Ị nwere ike weghara ihuenyo na Eserese ma ọ bụ odida obodo mode.
Ọ bụ otu n'ime ndị kacha ma dị irè ụzọ weghara screenshot, n'agbanyeghị ihe ụdị nke ngwa ị na-agba na gị iPhone ma ọ bụ iPad.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị weghara scree ma ọ bụ video ndekọ software, lee dịghị ihe ọzọ n'ihi TinyTake free software nwere ike tinye-echegbu gị pụọ. Ị nwere ike weghara onyonyo, na vidiyo na kọmputa gị na ihuenyo na-eso ha na ndị enyi gị na nkeji. Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eji, ebe a bụ ihe dị mfe guideline inyere gị aka.
1 Ị mkpa aha akaụntụ na TinyTake ihuenyo Capture.
2. Mgbe ọma na-egbu osisi, pịa usoro tree icon mgbe nke ị ga-ọkọnọ dị iche iche na ụdịdị nke kpọọ.
3 Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị weghara a kpọmkwem ebe na kọmputa gị, dị nnọọ pịa "Capture region", na họrọ mpaghara ị chọrọ weghara. TinyTake na-egosi na obosara na ịdị elu nha n'ebe ị na guputa.
4. N'oge na-adịghị mgbe ị weghara screenshot, a preview window ga-gbapụta. Ị nwere ike ịhọrọ re-eme ya, annotate ya, ma ọ bụ nanị bulite ya.
TinyTake bụ free iji windows software weghara screenshot nakwa dị ka ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ na i nwere ike iji na-enweghị nsogbu ọ bụla.
imovie format, gịnị ka ị pụrụ mbubata na mbupụ?
Olee otú tinye nzacha ka iMovie on Mac
Olee otú Jiri iMovie dezie Videos-eme ka a Home Movie
> Resource> iMovie> Olee otú iji n'Imepụta Capture na iMovie on Mac / iPhone / iPad